” ခေါင်းတွေသာကုတ် “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” ခေါင်းတွေသာကုတ် “
” ခေါင်းတွေသာကုတ် “
Posted by ခင္ခ on Nov 13, 2013 in Creative Writing, Poetry | 16 comments
နောက် သမဒ ငါးဆက်လောက် ခြားပီးမှ
ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရမယ် ….
ကိုယ်ပါ ခေါင်းကုတ်နေရအုံးမယ် … ငိငိ …
သူ တို့ အဖေဂျီး သူတို့သင်လိုက်ပြီးသားးးး
အဲလိုတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု တင်လာရာက ခု အိုအိုင်စီ ကိတ်စနလည်းရောက်ရော အီလဲဗင်း ဘီလီရန် ကိတ်စန မေ့သွားကြ။
တစ်ခု ပေါ် လိုက် ဖုံးချင်လိုက် နောက်တစ်ခု ထပ်ဖော်လိုက်နဲ့ ခေါင်းကုတ်ချိန်တောင်မရပါဘူးဗျာ။
နားနား လုပ်ကြပါလို့ပဲ ပြောရမယ်။
တုတ်ပစ်တဲ့နောက်လိုက်နေတဲ့ သူတွေ အစား မောစရာကြီးးးးး
ဘီးစိတ်​​တွေ ရမယ်​.. ​ဟောဒီကဘီးစိတ်​​တွေ….
အဘ့တကထိပ်ခေါင် အဘဆြာရဲစည် says:
၂၀၂ဝ လောက်မှဘဲ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့မယ် စိတ်ကူးတယ် …
အဲ့ကျ ခေါင်းကုတ်စရာ ထပ်ရှိနေသေးလို့ကတော့ …
ဟွင်း …. ဟွင်း
တစ်နေ့တစ်ခြား အံ့ဩစရာတွေ များလာတာကတော့ အမှန်ရယ်…
version တွေလိုပဲ.. တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အသစ်တွေထွက်နေတာ..လိုက်လို့မမီဘူးရယ်…
မြင်ယောင်ပါသေး…. နောက် လေးငါးနှစ်…….
မိဘပြည်တူညားခင်ညာ… တားက ခုမှ အငယ်လေးချိတေးတာ… ကျမ်းမာရေးကလဲမကောင်း
“အမှုဖွင့်ခံထားရသော လယ်သမားကို ဖမ်းဆီးရာက လက်ထိပ်ခတ် ခံထားရသည့် လယ်သမား သေနတ်ကျည်ဆန် ထိမှန် ဒဏ်ရာရ”
ဆိုတော့ လယ်သမားက သူပုန်ဖြစ်တဲ့ခေတ်ဖြစ်နေပြီ…စိတ်ပျက်စရာတွေနေ့တိုင်းမြင်တွေ့နေရတယ်ဗျာ..
အို… ဘာတဲ့တုံး… နောက်တစ်ခါ လာပြန်ချီသေး…
News & In Myanmar
သမ္မတ လစာလျှော့ယူမှု ဥပဒေ ချိုးဖောက်သည့်ပုံစံဖြစ်နေဟု ဦးခင်အောင်မြင့် သတိပေး၊ လစာကိစ္စ သမ္မတထံ တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ခိုင်း
ဧရာဝတီ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၃
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ဥပဒေပါ သမ္မတလစာ သိန်း ၅ဝ ကို မခံစားဘဲ တလ ငွေကျပ် ၁၅ သိန်းသာ လျှော့ယူခံစားမှုသည် ဥပဒေ ချိုးဖောက်သည့် ပုံစံဖြစ်နေကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်က သတိပေး ပြောဆိုလိုက်သည်။
ယနေ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေး တွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ချီးမြှင့်ငွေ၊ စရိတ်နှင့်အဆောင်အယောင်များဆိုင်ရာ ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းဆွေးနွေးစဉ် ဦးခင်အောင်မြင့်က အထက်ပါအတိုင်း သတိပေးပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ နိုင်ငံတော် သမ္မတရဲ့လစာခံစားခွင့် သိန်း(၅၀)ဟာ ဥပဒေ မှာပါရှိပြီးဖြစ် တဲ့အတွက် လိုက်နာရ မယ်။ အခု လို မယူ တဲ့ အတွ က် ဥပဒေ ကို ချိုး ဖေါက် သလို ဖြစ်နေ ကြောင်း၊ သူ့အနေ နဲ့ဒီလစာကိုယူသင့်ကြောင်း ၊သူ မယူ တဲ့ အတွက် အခု လို ဥပဒေ ကို ပြနြ်ပင်နေရတယ်´´ ဟု ဦးခင်အောင်မြင့်က ဆိုသည်။
သမ္မတက လတ်တလော တလ ငွေကျပ် ၁၅ သိန်းရယူနေသည့်အတွက် ယင်းလစာအတိုင်း ဥပဒေတွင် ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းပေးရန် လွှတ်တော်က ဆောင်ရွက်သောအခါ ဘဏ္ဍာရေး ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မောင်မောင်သိမ်းက သမ္မတ၏ လစာ တလ ၁၅ သိန်းဟု ပြဋ္ဌာန်းလျှင် သမ္မတ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကျနိုင်ကြောင်း တင်ပြ လာသဖြင့် ဦးခင်အောင်မြင့်က “သမ္မတအနေဖြင့် ဥပဒေပါ သိန်း ၅ဝ လစာ ခံ စားခွင့် ဆက် လက် ခံ စား မယ်၊ မခံစားဘူ း´´ မေးမြန်းရန် ဒေါက် တာ မောင် မောင်သိမ်းကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ထံသို့ တိုက်ရိုက်ဖုန်း ဆက် မေးမြန်းခိုင်းခဲ့ကြောင်း၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က တလ သိန်း၅ဝ မ ခံ စား လိုဘဲ လစာ ခံစား ခွင့် သတ် မှတ် ချက် ကို လွှတ်တော် က သာ သတ်မှတ် ပေးရန် ပြန် လည် ပြောဆို ခဲ့ ကြောင်း သိရှိရသည်။
လတ်တလောတွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ချီးမြှင့်ငွေ၊ စရိတ်နှင့်အဆောင်အယောင်များဆိုင်ရာ ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း အတည်မပြုနိုင်သေးပေ။
Wow ဖော်ပြတဲ့ ကွန်မန့်အတွက် FB မှာ အဖြေလေးတွေ့လို့ ယူလာပြတာပါ။
ဇာတ်မင်းသားများ ဇာတ်ကတော့ နောက်မှာကားလိပ်တွေရှိတယ်တဲ့ အဲဒီ ကားလိပ်တွေရဲ့နောက်ကို မရောက်ဖူးရင် ကြုံတဲ့အခါ တစ်ခါလောက် စပ်စပ်စုစုသွားကြည့် ကြည့်ပါလား အဲဒီမှာ ဘာတွေ မြင်တွေ့ရမလဲလို့လေ ဒါလေးပါဘဲ။
* သူ့အမြင် သူ့အပြော *
ထားစရာမရှိအောင် ချမ်းသာပြီးသားမို့ မဖြစ်မကျယ် လစာလေး လျော့ယူပြပြီး ပြည်သူ့မေတ္တာချူပြ နေတာကို
ဘုရားမှတ်ပြီး ဖင်ဗူးထောင် မတတ် ဖြစ်နေကြတဲ့လော်ဘီတွေကိုအံ့ပါရဲ့။
လစာငွေလေး မယူပဲ အင်မတိ အင်မတန် အနစ်နာခံပြတဲ့ပုံ စတန့်ထွင်တယ် ဆိုတာ ကျုပ်အဖို့ ဟာသပဲ။
တိုင်းပြည်ကိုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးနည်စေချင်ရင် အလွယ်ကလေး။ ဟာသ လူရွှင်တော် ဝံကြီးတွေသာ ခေါက်ထားလိုက် ။ တစ်လ သိန်းငါးဆယ်မကဘူး။ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ သက်သာတယ်။
ကြီးကြီးမာစတာတွေရဲ့ စောရဇာတ်လမ်း နှစ်ပုဒ်သုံးပုဒ်လောက် အရေးယူပြလိုက်ပါလား။ လစာလျော့ယူတာထက် ပြည့်ဘဏ္ဍာ ဆယ်ဆ ပိုသက်သာလာလိမ့်မယ်။
ဝန်ကြီးဋ္ဌာနတွေက for show project တွေ ကိုသာ သေချာစီစစ် ပေး လစာထက်မကတဲ့ငွေ တွေပြည်သူတွေ အတွက်ထွက်လာလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းတွေကို လက်သင့်စားတော်ခေါ် ခရိုနီတွေလက်ထဲ အောက်ဈေးနဲ့ထိုးထည့်ပြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုတာတွေကို သေချာကြပ်မတ်လိုက် နိုင်ငံအတွက် ဘီလျံနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေ ပြန်ပြီးကျောက်ခဲရေပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ဒါပေသိ official လစာထက်
under table တွေ ဂါဝရတန်းရှင်းတွေက ပိုပြီးမြိုးမြိုးမြက်မြက် ရနေလို့ လား
လစာမမက်နှစ်ကျပ်ကွက်နင်းတာလားတော့မသိ ။ မပြောတတ်ဘူးလေ ။
ခိုးစားရတဲ့ အသီးက ကိုချိုတယ်ဆိုလား ။
ဘောင်ဘီ ချွတ်ဆို တာကလည်း အကျင့်ကပါနေတတ်တော့ အထုံဝါသနာဆိုတာကလည်း ဖြတ်နိုင်ခဲကိုး။
( Pyae Phyoe Aung )
မီးတို့သမ္မတကြီး သနားပါတယ်… အဲလိုတော့ မပြောပါနဲ့ လေးခရယ်…